ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ အလွန် ကာလ - Yangon Nation News
By : သက်နိုင်စိန်
ကိုဗစ်၁၉ ဖြစ်နေတဲ့ကာလ လူအသွားအလာ ရှင်းနေတဲ့အချိန် မန္တလေးမြို့တော်ရဲ့ လူစည်ကားတဲ့ ဈေးချိုဘက်မှာ လမ်းတွေခင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတွေပြုပြင်နေတဲ့အကြောင်း ဖတ်ရမြင်ရတော့ အခြေအနေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်တဲ့ မန္တလေးတိုင်း အစိုးရနဲ့ မြို့တော်ဝန်တွေကို ချီးကျူးမိပါရဲ့။
အဆိုးတွေကြားကနေ ဘာတွေအကောင်း ရှာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အတွေးလည်း တွေးမိလာတယ်။
အဆိုးတွေလွန်တဲ့တနေ့ အကောင်းတွေ အလှည့်လည်း ရှိလာဦးမှာ‌ပေါ့။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ဆူနာမီဒုက္ခခံစားပြီးတဲ့နောက် တိုင်းပြည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အရင်က ဆန့်ကျင်ဖက်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့ အာချေးပြည်နယ်က ခွဲထွက်ရေးသမားတွေ ပူးပေါင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
မတူညီတဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် သူတို့အားလုံး ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဆူနာမီအတွေ့အကြုံဆီကနေ သင်ခန်းစာတွေကို မျှဝေခံစားလိုက်တာက လုံးဝကို မတွေးထားခဲ့ဘူးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ အသီးအပွင့်တွေ‌ပဲပေါ့။
သူတို့တတွေ အခုထိ အေးချမ်းစွာ ဆွတ်ခူးနေကြတုန်းပါ။
အဲသလို သဘာဝဘေးဒုက္ခကြီးမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီ့ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အကူအညီမတောင်းခင်မှာပဲ ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေ လှည့်ပြန်သွားခဲ့ရတယ်။
၂၀၀၈ မေ လဆန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်အပြီး ဆယ်ရက်ခန့်အကြာ မေ၁၂ ရက်မှာ တရုတ်ပြည်ဇီချွမ်ပြည်နယ်မှာ လူပေါင်းများစွာသေကြေခဲ့ရတဲ့ ပြင်းအားအဆင့် ၈ ရှိတဲ့ငလျှင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရက နိုင်ငံတော်အဆင့်ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးကာမှ တရုတ်ငလျှင်ထက်သေကြေမှုပိုများခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမေ ၁၉ ရက်ရောက်မှသာ မေ ၂၀ရက် မှ မေ၂၂ ရက်အထိဝမ်းနည်းကြောင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့များအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော်အလံကိုယင်းနေ့များတွင် တဝက်လွှင့်ထူရန်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့ကို သတိရခဲ့ကြတယ်။
ကူညီမယ့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး တရုတ်ပြည်ဇီချွမ်နယ်ကို ရောက်သွားကြတယ်။ ယာယီရွက်ဖျင်တဲတွေ အမြောက်အများ ငလျှင်ဒဏ်ခံ တရုတ်တွေလက်ခံ ရရှိချိန်မှာ အမိုးအကာမဲ့ မုန်တိုင်းခံ မြန်မာပြည်သူတွေ မိုးထဲလေထဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ခွက်ကလေးတွေကိုင်ပြီး အစားတစ်နပ်စာရဖို့ မျှော်ငေးနေကြခဲ့ရတယ်။
အဲ့ဒီ့အဖြစ်ဆိုးကြီးရဲ့အတွက် တောင်းပန်စကားတွေ မကြားခဲ့ရပါပဲ တက်သုတ်နှင်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေကြီးသာအဖတ်တင်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံတည်းမှာ အစိုးရနှစ်ရပ်ရှိတယ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာကအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတူ မြန်မာဟာ ICJ မှာတရားစွဲခံရတဲ့အထိ ကမ္ဘာမှာအမည်ဆိုးရခဲ့ပြန်ပါရော။
ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကို ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုးအ‌ဖြစ် ကြေငြာလိုက်တာတောင် အစိုးရကအကူအညီတောင်းလျှင် ကူညီရန်အသင့်ရှိပါသတဲ့ ဆိုတဲ့လေသံတွေ ပစ်လာကြတယ်။
ကပ်ဘေးဆိုးဟာ အနီရောင်အဆင့်ရောက်လျှင် အင်အားရဲ့ ၂၀%ကို အသုံးပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။
အဲသလို အခြေအနေအရပ်ရပ်ကနေ နောက်ဆုံးမှာတော့ အစိုးရအနေနဲ့ တပ်မတော်ပါဝင်တဲ့ ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် အောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ဟာ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း လူမျိုးမရွေး ဒုက္ခပေးနေတဲ့ အတွက် ကိုယ့်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အကူအညီပေးနေလို့လည်း မရပါဘူး။ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သက်သက်ကို ဂရုစိုက်နေလို့လည်း မရပါဘူး။
ကိုဗစ်၁၉ဟာ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း လူမျိုးဘာသာမရွေး ရောဂါပေးနေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာဝင်တစ်ခုတည်းကို ဆုတောင်းပေးနေလို့လည်းမရပါဘူး။
သည်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ သင်ခန်းစာတွေပေးနေတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်အန္တရာယ်ကို ကြုံကြိုက်နေတာတောင် ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားခဲ့ရင် ဒါဟာထပ်မရနိုင်တော့တဲ့ ဘုရားပေးတဲ့ နောက်ဆုံးသော အခွင့်အရေး အဖြစ်နောက်ဆုံးသိလာရတော့မှာပါ။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို. KIO ဗဟိုကော်မတီကဖွဲ.စည်းထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးကော်မတီနဲ. ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံကြတဲ့သတင်းတွေ ဖတ်ရပါတယ်။
ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း ကြုံတွေ့ရင် ဆိုင်နေကြတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာကြရင်း ကိုဗစ် ၁၉ အလွန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နီးစပ်စေမှာလား ဆိုတာလေး မချင့်မရဲလေး မျှော်တွေးမိတာပါ။
” Covid -19 နဲ့ နယူးယောက်မြို့ “
(၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် COVID-19 ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါ